Wafti uu Hogaaminaayo wasiirka waxbarashada XFS oo Kormeerey iskuulka 15 Maay | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Wafti uu Hogaaminaayo wasiirka waxbarashada XFS oo Kormeerey iskuulka 15 Maay
Wafti uu Hogaaminaayo wasiirka waxbarashada XFS oo Kormeerey iskuulka 15 Maay
Wasiirka waxbarsha xukumada federalka soomaaliiya C/raxmaan Daahir Cusmaan iyo safiirka masar u fadhiyo soomaaliya Ambasator Tamer Safwat El.mahdiy ayaa maanta kormeeray dugsiga 15may oo ay dhigtaan kuwaad 550 araday ah oo heer aas aaska ee waxabarasha.
Safiirka masar u fadhiya soomaaliya Tamer safwat. El.mahdy ayaa sheegay in aya qeybtahay mashruucaan taageeraha ay siinyaan dhanka waxbarshada islamarkaan ay kor u qaadi doonaan heerka aqoonta macalimiinta dhiga iskuulka.
Wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare dalka C/raxmaan Daahir Cusmaan oo la hadalay warbaahinta ayaa sheegay in kormeerkaan uu yahay ogaanshaha sida ay shaqada u socoto sido kale waxa uu ku aamanay in masaarida ay yihiin dadka garabtaagan marwalbo waxbarshada.
Dowlada masar ayaa qeyb ka aha dowladaha ka taageera waxbashada soomaaliya tan iyo dowladahi dalka soomaaray iyado haatan gacanta ku heyso goobo waxbarsho uu ku yalaa gudaha soomaaliya isla markaan ku caawiyo dadka aanan awoodin in ay ka bixin ciyaalkooda qarashaadka faraha badan ee ku baxaya waxbarashada.
Previous articleDanjiraha Midowga Yurub ee Soomaaliya oo faah faahiyey xaaladda Muwaadiniinta ku xiran Liibiya
Next articleWasiir ku xigeenka Wasaaradda Qorsheynta iyo Maalgashiga XFS oo soo dhaweysay wafdi ka socda dalka Qadar